:Bọchị: Disemba 22, 2019
CHP'li Kayışoğlu Ọ ga-abịa Bursa High Speed ​​Train ..!
Onye isi oche CHP Bursa Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ndị omebe iwu ọgbakọ 2020 kwuru okwu mmefu ego. Kayışoğlu katọrọ ụzọ ụgbọ elu dị elu na-ada ike n'okwu ya. N’okwu ya, CHP Kayışoğlu, Bursa, Bursa, ụgbọ elu nke ọsọ [More ...]
Erdogan na-enye Datebọchị maka Channel Tender Channel
Erdoğan na-enye akụkọ ntanetị maka Channel Istanbul Tender; Onye isi ala, Recep Tayyip Erdoğan, n'okwu ya na Nzukọ Mpụga Ndị Ọrụ na-eme na Istanbul Congress Center na ememe mgbaafọ HIB A 2018, kwuru, nasıl Ka Suez dị n'ụwa, [More ...]
Aro na-adọrọ mmasị maka ncheta akụkọ akụkọ ochie na Canal Istanbul Canal
Otu n'ime ajụjụ ndị a na-enyo enyo siri ike na mpaghara Kanal Istanbul bụ akara aka nke ncheta akụkọ ihe mere eme n'okporo ụzọ. N'akụkọ ihe ochie nke a kwadebere n'ime usoro nke Nnyocha Mmetụta Onodu gburugburu (EIA), [More ...]
E mepere Bridge Çarşlı Çavuşlu maka ọrụ
E mepere akwa Çavuşlu Bridge iji rụọ ọrụ; Obodo Kocaeli, nke na-akwado mkpa ọrụ ụgbọ njem n'obodo etiti, na-arụ ọrụ iji belata njem nke ụmụ amaala bi n'ime ime obodo na mpụga etiti ahụ. N'ihi ya, mpaghara Körfez Çıraklı [More ...]
İzmir ga-abụ ebe egwuregwu ụgbọ elu
Onye isi obodo İzmir bụ Tunç Soyer kwuru na ha ga-arụ ọrụ dị mkpa iji mee ka İzmir bụrụ ebe egwuregwu ụgbọ elu. Tunç Soyer, onye isi obodo İzmir Obodo ukwu, zutere ndị otu Associationzmir Aviation Club Association [More ...]
Channel Istanbul Scandal nke DHMİ
Airlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu nke steeti (DHMİ), ọrụ ụgbọ elu Istanbul, ọdụ ụgbọ elu Istanbul ọhụrụ ga-agbanwe echiche nke ịkpa ike na-emetụta 'anyị nyere'. DHMİ, mkpebi ọhụrụ na ọrụ ụgbọelu ọ bụla nke Kanal Istanbul [More ...]
Ntị Konyalar ..! Alaaddin Selçuk Mahadum Tram University
Ntị Konyalar ..! Alaaddin Selçuk Mahadum Tram University; Obodo Konya, a ga-arụzi arụmọrụ okporo ụzọ na Sọnde (echi) site na Mahadum Alaaddin-Selcuk kọwaara na ọrụ ụgbọ ala ga-arụ ọrụ na bọs. [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 22 December 2003 Train Train in Freight Transport
Taa na History 22 Disemba 1885 Ottoman Alaeze Ukwu na Baron Hirsch nwere nkwekọrịta na esemokwu niile dị n'etiti ndị ahụ ajụla oyi ma enyere ikike nke ụlọ ọrụ okporo ụzọ Rumeli na Hirsch. Ntinye aka maka ala nke ala steeti [More ...]